ဝှု့ဖံလံးဖံးကှီု (က်ါဒါံ်န့ါ် လွံဥစ် အ်ါထိနါံ်ဧိါ် တ်ါကလ့ါ်) ဘဥတှုထံဥန့ဥအီါ်လ့ အဒိးနှု့ဘဥ၀ဲCovid -19 တှုဆါအဃဥ တှုကစီဥ 12.9.2020 | Radio Veritas Asia
၀ှု့ဖံလံးဖံးကှီု (က်ါဒါံ်န့ါ် လွံဥစ် အ်ါထိနါံ်ဧိါ် တ်ါကလ့ါ်) ဘဥတှုထံဥန့ဥအီါ်လ့ အဒိးနှု့ဘဥ၀ဲCovid -19 တှုဆါအဃဥ တှုကစီဥ 12.9.2020
၀ှု့ဖံလံးဖံးကှီု (က်ါဒါံ်န့ါ် လွံဥစ် အ်ါထိနါံ်ဧိါ် တ်ါကလ့ါ်) ဘဥတှုထံဥန့ဥအီါ်လ့ အဒိးနှု့ဘဥ၀ဲCovid -19 တှုဆါအဃဥ တှုကစီဥ
Cardinal Luis Anotonio Tagle န့ဥ အတှုမ်ါမှု့ဝဲ တှုမ်ါဒိဥထီဉ်အါထီဥ ဒီးတှုစံဥတဲါ်တဲလီါ်တှု သးခုကစီဥ အကရ့ လ့ပါပါရဟန်းမင်းကြီး အိဥတှုလှီုဟီဥက၀ီါ်ပူါ် အ၀ဲမှု့ဝဲ ပါပါရဟန်းမင်းကြီး အကိတိဏခိဥကျ့ဥတဂ်ါန့ဥ မှု့လ့ တှုထံဥနှု့အီါ်လ့ အဒိးနှု့ဘဥ၀ဲ Covid တှုဆါအဃဥဖဲ အပူါ်ကွံဏ မှုလွှုံနါံ် ဖဲအဟဲက့ါ်နုဏလီါ်ဝဲဆူ ကှီုဖံးလံးဖံး မနါံ်လါ် ၀ှု့ပူါ်အခါန့ဥလီါ်. ၀ှု့( Vantican ) တခီ ထုးထီဥရ်ါလီါ်ဝဲတှုကစီဥ ဒီးပဏဂှု့ပဏကျ့ါ်ဝဲ ဖဲမှုဎှဲုနါံ် ဟါလီါ်ခီအဆ့ကတှီုန့ဥလီါ်’
ဒ်ပစံးတှုအသိး Cardinal Luis Anotonio Tagle န့ဥမှု့စှု့ကီးဝဲ ထံကှီုကိးဘ့ဥဒဲး Caritas အတှုကရ့ကရိ အပှါ်ပ့ါ်လှီုဆ့ဥနီါ်အခိဥအနှုတဂ်ါန့ဥလီါ်. အဃိဆ့ကတှီုခဲအါံ် Cardinal Luis Anotonio Tagle ဘဥအိဥသဒ့အသး လီါ်လီါ်ဆီဆီဝဲ ဘဥနုဏလီအိဥ၀ဲလ့ (Quanrentine)အတှုလှီုန့ဥ ပဒိးနှု့ဘဥတှုကစီဥန့ဥလီါ်. ပှါ်လ့အလဲါ်တှုတပူါ် ဃီဒီး Cardinal Luis Anotonio Tagle သ့ဥတဖဥ အ၀ဲသ့ဥတှုလ့ အကဘဥသမံသမိး မ်ါကွှုတှုဆူးတှုဆါအဂှု့န့ဥ Vantican ဒုးသ့ဥညါဝဲ တှုကစီဥန့ဥလီါ်’
ဖဲတနွံအါံ်အတှီုပူါ် ပသ့ဥညါဘဥ၀ဲလ့ Cardinal လဲါ်ဝဲအတှုလဲါ်တှုက့ါ်ဆူ (တူရင်းဝှု့) ဒီးဖဲလါစဲပတ့ဘ့ဥ ရသီ အဆ့ကတှီု အ၀ဲဒိးသမံသမိးအသး မ်ါကွှုဝဲတှုဆါအဃဥ ဖဲဝှု့ရိါ်မ့ါ် လ့တှုမ်ါကွှုတှုဆါအဃဥ က့ါ်ဒိးန့ဥဘဥက့ါ်ဝဲ အဆ့ Swab test လ့တှုဆါအဃဥ တအိဥ၀ဲဘဥန့ဥ Vatican ပဏဂှု့ပဏကျ့ါ် အုဥအသးန့ဥလီါ်.
ဖဲလါစဲပတ့ဘ့ဥ ၈သီ အဆ့ကတှီု အ၀ဲဟ့ဥ၀ဲတှုစံဥတဲါ်တဲလီါ် လ့ပှါ်လ့ အမ်ါတှုလ့တှုမဲဏညါ လ့ပှါ်လ့အဒိးန့ဥဘဥ Covid တှုဆါအဃဥသ့ဥတဖဥအဂှီုန့ဥ ပသ့ဥညါဘဥပ၀ဲ ခီဖျိလ့ CBCP အတှုကစီဥအပူါ်န့ဥလီါ်.